विकासको भोक र व्युत्पन्न रोग - Goraksha Online
वातावरणीय प्रदूषण दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । मानिसले उत्पादन गरेको प्रदूषण मानिसकै समस्या बनेको भए तापनि यसबाट पाठ सिक्ने बानीको सजिलै नहुने देखिन्छ । उत्सर्जन गरेको वस्तुले स्वयम्लाई हानी गरिरहेको हुन्छ । यो क्रम जनसंख्या वृद्धिसँगै फोहरका स्रोतहरु पनि बढिरहेका कारण दिन प्रतिदिन जटिल समस्या बनेर मानव स्वास्थ्यलाई घेरिरहेको अवस्था हो ।
स्थानीय स्रोतबाट उत्पन्न धुलोका कणहरु र धुवाँ वायुमण्डलमा मिसिएर जताततै फैलिने हुँदा एक ठाउँमा उत्पादित धुलो र धुवाँले व्यापक रुपमा असर गरिरहेको हुन्छ । आजभोलि वायुमण्डल कति धुलो छ भनेर अनुमान गर्न चिल्ला सतह भएका वस्तुमा टाँसिएको धुलोको तहलाई हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अर्को उदाहरणलाई लिऔँ, बाहिर राखिएका सवारी साधन वा त्यस्तै वस्तुहरु राखि छोडेका बेला हल्का मात्र वर्षा हुँदा हिलोले छ्यापेझै हुन्छ । धेरै दिन पानी नपरेको अवस्थामा धेरै धुलो वायुमा बाक्लिएर त्यस्तो भएको हुनु स्वभाविक हुन्छ । तर दुई÷चार घण्टा मात्र पानी नपर्दा वायुमा त्यति धेरै माटो थुप्रिनु स्वास्थ्यको दृष्टिले गम्भीर चुनौती बनेर उभिएको बुझ्नुपर्छ ।
अब हाम्रो बायुमण्डलमा यति धेरै धुलो कसरी जम्मा हुन्छ ? निश्चय पनि सोचनीय विषय हो र यसले हाम्रो स्वासयन्त्र कति प्रभावित होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । किनभने पानी नपरेको दुई घण्टा बित्न नपाउँदै हामीले फोक्सोमा हुलेर प्राणमा रुपान्तर गर्ने बायु यतिका धुलोले भरिएको हुन्छ । त्यो त्यही सिमसिमे पानीले भिजेर सुकेको ठोस सतहहरुलाई हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । धुलोको स्रोत हामीले विकासको नाममा गर्दै गरेका उद्योग वा यन्त्रिकहरुको अव्यवस्थित प्रयोगले सिर्जना गरेकोमा कुनै शंका छैन । हाम्रो सडक, सिमेन्ट कारखाना, ढुङ्गा खानी, बालुवा खानी, सबै विकासका शीर्षकहरु हुन्, जसले धुलो उत्पादन गरिरहेका छन् ।
त्यो धुलो कसैको रोजगारीसँग सम्बन्धित छ त कसैको समस्या मात्र बनिरहेको छ तैपनि यस बारेमा कमैले मात्र आँकलन गरिरहेका होलान् यसको समाधान खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? समस्या मानिसकै कारणले बढेको हुनाले समाधान गर्नै नसक्ने पक्कै पनि नहुनुपर्ने हो तर विचार पु¥याउनुपर्ने समय गइसकेपछि, हेरफेर गर्न धेरै क्षति व्यहोरेर गर्नुपर्छ । सहर बजार होस् वा गाउँले व्यापारिक केन्द्र, जहाँ पनि सडकको सुविधा पहिले हेरिन्छ र त्यहाँ त्यहीँ धुलाम्मे सडक । त्यहाँ पसलका सामान धुलोबाट बिग्रिरहेका, खाद्य सामग्री नष्ट भइरहेका, औषधी, कपडा, मिठाईलगायतका सबै वस्तुहरु बिग्रेको बारेमा धेरै चिन्ता छैन र उपभोक्ताहरु पनि त्यसको गुणस्तरप्रति सचेत भएको देखिँदैन । सरकारी निकायबाट अनुगमन गरिन्छ, नाम मात्रको । त्यसले प्रदूषणको स्रोत नियन्त्रण गर्ने सोच र जिम्मेवारी नहुने भएकाले औपचारिकतामा सीमित हुन्छ ।
धुलोको नियन्त्रण गर्नसके मात्र धेरै हदसम्म मानिसको स्वास्थ्यमा प्रदूषणको असरबाट लाग्ने स्वासप्रस्वास र छालामा देखिने समस्या धेरै नियन्त्रण हुनसक्छ । छाला चिलाउने, घाउ, खटिराजस्ता बिरामीहरु पनि धुलोले हुनसक्ने भएकोले धुलोको मात्रा बढेसँगै घाउखटिरा, आँखामा र एलर्जिक लक्षणहरु बढिरहेको पाइएको छ । धुलोबाहेक मानव स्वास्थ्यमा समस्या ल्याइदिने प्रदूषणका अनेकानेक स्रोतहरु छन् । केही नजानेर व्यवस्थित हुनसकेका छैनन् भने केही जान्दाजान्दै गरिएका हुन्छन् ।
धुवाँ, जथाभावि असुरक्षित प्रयोग गर्दा हावामा तैरिरहेका विभिन्न रसायनहरु, सडेगलेका वस्तुबाट निस्कने दुर्गन्धयुक्त वायु र अनावश्यक उत्पादन भइरहेका ध्वनिप्रदूषणले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या ल्याइरहेका हुन्छन् । खास कुरा के हो भने जुन प्रदूषण नगरिकन विकासको उपभोग गर्न सकिन्छ । विकासका रुपमा मानिसको सुविधा वृद्धिका धेरै प्रयत्नहरु गर्दा न त मापदण्ड बनाउने कल्पना गरिएको हुन्छ न त मापदण्डबमोजिम त्यसलाई लागू गर्ने दृढता देखिन्छ ।
यसैगरी प्रदूषण घटाउन सहयोगी कदम दाङमा करिब तीन वर्ष अघि सुरु गरिएको ‘नो हर्न’ अहिले कसैले पालना गरेकै छैन । कार्यक्रम सुरु गरेको केही समयसम्म नो हर्न, अथवा हर्न निषेधित क्षेत्र लेखिएका बोर्डहरु झुण्डिएका भए पनि अहिले तिनिहरु अहिले हराईसके । अहिले बोर्डहरु हराइसके । आजभोलि स्कूल, अस्पताल र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा ध्वनि आतड्ढ मच्चिएको छ । सडक अनुशासन कायम राख्ने एउटा राम्रो उपाय ध्वनिरहित चलाई कायम गर्नु हो । यसले गति सीमित गर्न बाध्यता गराउने हुँदा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै सडक यातायातमा अनुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ ।
राम्रो कामको सुरुवात जसले गरे पनि त्यसलाई सबैले साथ दिनु अनिवार्य हुन्छ । सके आफैले सुरु गरौँ नसके अरुले गरेकोमा अर्थपूर्ण सहयोग गरेर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विवेक प्रदर्शन गरौँ । धुलोको प्रदूषणले ग्रस्त हामी दङाली सिमेन्ट उद्योग बनाउँदा ध्यान पु¥याउन नसक्दा पछुताउनु परेकै छ । अब जहाँसुकै टिप्परहरु चलाउने तर त्यसले मापदण्ड पूरा गरेको नगरेको कसैले वास्ता नगर्ने, व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय गर्दा जनसाधारणको स्वास्थ्यमा अथवा वातावरणीय प्रतिकूलता हुन्छ कि भन्ने किञ्चित जिम्मेवारीबोध नहुने हो भने त्यसले अराजकता ल्याउने गर्छ । अराजकता र असभ्यता समाजको सुन्दरता घटाउने कारकतत्वहरु हुन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीले आतंकित भएपछि मास्क लगाउन बाध्य भए पनि त्यसलाई जहाँ पायो त्यहाँ फ्याँकेर फोहर बढेको विषयमा धेरैलाई ध्यान छैन । कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको स्थान, जस्तै मन्दिरको वरिपरि, सार्वजनिक पानीधाराको नजिकमा फोहर फ्याँक्दा आफ्नो स्वास्थ्यमा हानी पु¥याइरहेको जबसम्म गरिँदैन तबसम्म प्रदूषण कम गर्न असम्भव नै हुन्छ । गाडी हाँकिरहेको व्यक्तिले पैदलयात्रुलाई हिलो छ्याप्ने गरी दगुराएर, धुलोले वरिपरिकालाई रङ्गाउनुमा मनोरञ्जन सम्झ्यो भने त्योभन्दा असभ्य कोही हुँदैन । तर यस्ता कुरामा न त कतै पढाइ सिकाइ हुन्छ तर अन्तरज्ञान स्वतःस्फूर्त जन्मिन्छ बाटो, पुल, पानी, बिजुली, फोनजस्ता असीमित लगानीका सुविधाहरुमा डुबुल्की मार्न सफल भएको अवस्थामा पनि आफ्नो फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेनौँ भने विकास सार्थक हुन सक्तैन ।
तीजको नाच हेर्न गएकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार